Akwụkwọ ntụaka |
Tankị gbaa ụka biya na Germany
Ekele ndị ahịa Germany anyị, n'ọnwa gara aga ha nwetara tankị. Obi dị m ụtọ ịnweta nzaghachi site na ha, ma nye anyị aha dị elu site na tankị anyị. Nwee olileanya na anyị nwere ike imekọ ihe ọnụ n'ọdịnihu ma nyere ha aka itolite. Ọzọkwa ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịkwado akụrụngwa na ọrụ anyị...
2020 Austria 1000L ebe a na-eme mmanya
site admin na 21-02-05
GALLIEN, Dị na ọmarịcha obodo Austria. Mbụ anyị zutere na Nuremberg Fair, Germany na 2018. Anyị tụlekwara ọtụtụ ihe banyere ebe a na-eme biya. N'ikpeazụ, o kwuru atụmatụ ya wee wuo ebe a na-eme biya maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ ya. ...
Germany Ngwakọta 500L ime biya usoro
---500L microbrewery na Germany. A na-etinye 500l microbrewery nke Firma Hausbrauerei Leidner ma na-agba ọsọ na mmalite nke 2017. Ọ bụ n'ezie ahụmahụ obi ụtọ ịrụkọ ọrụ ọnụ na ịkwado onye nwe Mr Roland. Ọ bụ ọkachamara na ahụmahụ gbasara cr ...
Germany 1000L Brewery sistemu
Obi dị m ụtọ ịkọrọ gị ozi ọma. Ugbu a, anyị nwere ezigbo ahịa na Europe, ebe a bụ ụlọ ọrụ 1000L. Nke a unit brewery usoro bụ 4 arịa brewhouse na 3pcs 1000L na 3pcs 2000L fermenter. Ọzọkwa, anyị emeela mkpuchi mkpuchi okpukpu abụọ dịka t ...
France 500L ngwakọta mmanya
Nke a bụ ndị ahịa France anyị, ebe a na-eme mmanya bụ Labo du Brasseur ma guzobe ya na France. Ebe a na-eme biya bụ 500L ngwakọta usoro na uzuoku kpo oku na 4sets nke biya fermenter na 2sets nke biya biya na-egbuke egbuke. Onye ahịa...
A na-ebupụ fermenter 7BBL a na Canada wee nweta aha dị elu n'aka onye ahịa anyị. Ịse fermenter Tupu nnyefe, onye ahịa ezipụla akụkụ nke atọ ka ịlele ...
Canada 3.5BBL ebe a na-eme mmanya
Nzaghachi ndị ahịa Canada
Nke a bụ nnukwu onye ahịa anyị na Bolivia, anyị ekwuola ọtụtụ oge na ogologo oge. N'ikpeazụ, ha na-ahụ ihe ha chọrọ maka akụrụngwa ịme ihe. Ọzọkwa, onye ahịa ahụ kelere m maka inwe ndidi ma ṅaa ntị na ọrụ ya. Dị ka nkwekọrịta nkwekọrịta nke nkwekọrịta, anyị sh...
Belgium 2000L na 4000L ebe a na-eme biya
Belgium 2000L na 4000L brewery oru ngo Ugbu a, anyị na-emepụta 2000L na 4000L brewery oru ngo maka anyị ahịa, a ahịa anyị zutere na Nuremberg ngosi na 2018. Na anyị tụlere nkọwa nke na-ekpo ọkụ na-eme ka brewery atụmatụ. Ebe a na-emepụta ebe a na-emepụta mmanya ugbu a: ...
Ebe a na-eme mmanya na Belgium, nke e wuru na 2012. Ọzọkwa onye nwe Franky chọrọ ịgbasa ebe a na-emepụta ihe na 2017. Onye na-emepụta ihe bụ 700L, nakwa PVRV na PRV bụ akara KIESELMANN dị ka onye ahịa chọrọ. ...